Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på somaliska.
Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in laga hortago faafitaanka COVID-19.
Isku difaac tallaal
Hey’adda Caafimaadka Dadweynaha waxay ku talinaysaa in dhammaan dadka ah 12 jir ama ka weyn ay qaataan tallaalka ka hortagga covid-19.
Hey’adda Caafimaadka Dadweynaha waxay xitaa ku talinaysaa in dhammaan dadka ah 18 jir ama ka weyn ay qaataan qayb tallaal oo buuxin ah.
Warbixin ku saabsan tallaalkan:
Waxa fiican in laga ogaado tallaalkaaga ka hortaga covid-19 (ku qoran af Iswiidhish)
Bogga internetka ee 1177.se waxaad ka akhrin kartaa wixii dheeraad ah ee ku saabsan tallaalka oo ku qoran luqado kala duwan:
Guriga joog oo iska ilaali xiriir dhow inaad la yeelato dadka kale haddii aad xanuusanayso oo aad leedahay calaamado ahaan kara kuwa covid-19. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad samaysay shaybaarka qofku keligii sameeyo oo soo saaray in aanad qabin cudurkan.
Wac telafoon lambarka 1177 haddii aad u baahantahay caawimaada in la qiimeeyo calaamadahaaga ama talobixin ku saabsan meesha aad ka raadsan karto daryeel caafimaad.
Haddii aad ka shaqayso dhinaca daryeelka iyo xanaanada dadka waayeelka ah waxaa lagugula talinayaa inaad iska baarto covid-19. Dhinaca 1177.se waxaa ku jirta warbixin ku saabsan sid baaritaanku uga dhaco halka aad ku nooshahay.
Talooyinka gaar ah ee aad isku difaacayso adigaaga aan qaadan tallaal
Haddii aad tahay qof weyn oo aanad is tallaalin waa inaad samayso taxaddar gaar ah. Taas micnaheedu waa in aad iska ilaaliso meelaha ciriiriga ah iyo isku imaatinyada dad badan ee meel gudo ah. Dadka aan tallaalnayn ee ka tirsan koox caafimaad ahaan khatar ku jirta waxay khatar weyn ugu jiraan inay si halis ah u xanuusadaan. Khatarta in si halis ah loo xanuusado waxay xitaa la korodhaa kolba marka da’du sii korodho.
Kooxaha khatarta covid-19 (Socialstyrelsen.se, ku qoran af Iswiidhish)
Baaritaanka covid-19 (PDF, 118 kB)
Safarka soo socda ka hor, ha illaawin ... (PDF, 214 kB)
Ma safri doontaa? (PDF, 214 kB)